ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များလုံခြုံရေး မျက်ခြည်မပြတ် ကင်းစောင့်နေရ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Daw Aung San Suu Kyi and Dr. Maung Zarni @ London School of Economics and Political Science’s Web cast
The lentil storehouses, owned by Burmese Muslims, had been set fire »
ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များလုံခြုံရေး မျက်ခြည်မပြတ် ကင်းစောင့်နေရ
Source:MM.Net ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များလုံခြုံရေး မျက်ခြည်မပြတ် ကင်းစောင့်နေရ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်ကမှ ရခိုင်ဗလီကို ပိန္နဲကုန်းဗလီ လို့ နာမည်အတင်းအကျပ် ပြောင်းခိုင်းလို့ ပြောင်းထားရတာပါ။ တကယ်က ရခိုင်မွတ်စလင်ဗလီပါ”
ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များလုံခြုံရေး မျက်ခြည်မပြတ် ကင်းစောင့်နေရ ၊ ရခိုင်များ လုံခြုံမှုရနေသော်လည်း၊ မွတ်စလင်များ လုံခြုံရေးအတွက် ပူပန်နေရ
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၉ ကုက္ကိုင်းဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် မွတ်စလင်ပိုင် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင် ည ၂း၁၅ နာရီအချိန်၌ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့နေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ရန်ကို စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့နေကြပြီး ညအချိန်တွင် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များ ထပ်မံဖက်ဆီးမခံရစေရန်အတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်လည်းကောင်း ၀တ်ကျောင်းတော်များ လုံခြုံရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
“ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ ကုက္ကိုင်းဗလီရှေ့မှာ ညပိုင်းဆို ရဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက် တွေ့နေရတယ်။ ၈မိုင်လမ်းဆုံဗလီ နဲ့ သမိုင်းလမ်းဆုံ ဗလီတွေရှေ့မှာလည်း ……. ရဲကားတွေ ကင်းစောင့်နေတာတွေ့ရတယ်”ဟု ညပိုင်းတွင် ဗလီများအခြေအနေကို လိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့သူ စလင်းမ်ဘိုင်က myanmarmuslim.net သို့ ပြေကြားသည်။ “မနေ့ညပိုင်းက ရောင်နက်ဗလီ(မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်)ကို ဖျက်ဆီးဖို့လူတွေလာမယ်ဆိုလို့ ရဲတွေ အင်အား အပြည့်နဲ့ လာစောင့်ကြတယ်။ ရောင်နက်ဗလီနဲ့ ကပ်လျက်မှာ ရခိုင်ဗလီရှိတယ်လေ။ ဒါကြောင့် စိုးရိမ်ကြတာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင်ကမှ ရခိုင်ဗလီကို ပိန္နဲကုန်းဗလီလို့ နာမည်အတင်းအကျပ် ပြောင်းခိုင်းလို့ ပြောင်းထားရတာပါ။ တကယ်က ရခိုင်မွတ်စလင်ဗလီပါ”ဟု ၁၀၁ လမ်းတွင် နေထိုင်သူ မွတ်စလင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ “ကျွန်တော်တို့ ကျောက်မြောင်းက မမ်းဆာဗလီ(နာရီစင်ဗလီ)မှာတော့ ကုက္ကိုင်းဗလီ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး နောက်ရက်တော့ ရဲလာစောင့်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းရက်တွေတော့ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်ပဲ မွတ်စလင် တွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ကင်းစောင့်နေကြရတယ်”ဟု မမ်ဆာဗလီဝင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူငယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။ ရန်ကုန်တွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားမလာစေရန်အတွက် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများက ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အစ္စလာမ့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုက်တွန်းညွှန်ကြားချက်များကြောင့် ရခိုင်တို့အနေဖြင့် ပူပန်မှုများလျော့ကျသွားခဲ့ ရသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်ရေးရာဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောကြားကြောင်း ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ထုတ် The Voice Weeklyဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ “ကျွန်တော်တို့ မအူကုန်း လမ်းကျယ်မှာ TK နဲ့ အောင်သရဖူဆိုတဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ရွှေဆိုင် နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ မွတ်စလင်အများစုကြားမှာနေရတဲ့ အတွက် သူတို့အနေနဲ့ ဘာကို စိုးရိမ်ပူပန်ရမယ်ဆိုတာတောင် သိပုံမရပါဘူး။ သူတို့စီးပွားရေးလည်း မထိခိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်တွေသာ ရခိုင်အများစု ရှိတဲ့နေရာ မသွားရဲတာ၊ အမြဲစိုးရိမ်ပူပန်နေရပါတယ်။”ဟုမအူကုန်းလမ်းတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ကိုယ်တွေ့ကြုံနေရ သည့် အခြေအနေကို ပြောကြားသည်။ SK (MMM)
This entry was posted on June 20, 2012 at 4:10 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.